Sina 1/2 Fipetahana seza taratasy fidiovana taratasy, fanamboarana ary fanamboarana mihodina | Zhonghe
Ny fonosana fonosana fidiovana dia karazana vokatra manadio, azo antoka ary madio vita amin'ny pulp madio nafarana ho taratasy iray isan'andro. Ny fonosana fonosana fidiovana dia karazana vokatra manadio, azo antoka ary madio vita amin'ny pulp madio nafarana. Ampiasaina be amin'ny trano fidiovana any Eropa, Etazonia ary firenena mandroso hafa izy io. Ity vokatra ity dia mifandray mivantana amin'ny hoditra, manasaraka bakteria sy sery ary manakana ny fihanaky ny areti-mifindra. Ity vokatra ity dia manana ny fiasa toa ny fanary, voasasa amin'ny rano aorian'ny fampiasana azy, fahasimbana haingana amin'ny rano ary tsy mametaka ny kabine. Izy io dia vokatra azo antoka sy sariaka.
Pulp taratasy: fibre voaverina
Lanja: 13g / m2, 14g / m2, 15g / m2,16g / m2
Habe: 425mm * 360mm, na habe mahazatra
Fonosana: 250pcs / boaty, boaty 20 / baoritra; na fonosana mahazatra
* Sarona fonosana fidiovana taratasy fandroahana;
* Ny tany-tany dia ampiasaina amin'ny fonon'ny seza azo atsipy: mora vonoina, tsy misy atahorana amin'ny hoditra, sariaka amin'ny tontolo iainana.
* Fanontana ny lozisialy mpizara mpanjifa.
* Saron-seza azo ampiasaina sy tsy hadio.
* Esory ny ampahany toy ny arc. Aparitaho ny fonony ary apetraho eo amin'ny seza izany, kitiho ny bokotra flush aorian'ny fampiasana ny trano fidiovana.
* Atsofohy na dia miparitaka aza amin'ny fipetrahana ny urinaly hofehezina, ao anatiny dia mivadika ho urinaly ao anaty ny silaka lela, mba hisorohana ny rano tonga any am-pofoany ny tsifotra, ary ampiasao vita, ary sasao ny rano izay alaina ho azy.
* Mety ho an'ny hopitaly, teatra, gym, toeram-pivarotana, trano fisakafoanana, hotely, faritra fialan-tsasatra, efitrano fivoriambe, biraom-panjakana, sekoly, fiaramanidina, fiaran-dalamby, lamasinina, bidet sy ny toerana hafa rehetra.
Malalaka 100% ary ho levona haingana ao anaty rafitra septika. Ny fonosana ao anaty ao anatiny dia manome famoahana iray isaky ny mandeha mba hampihenana ny fako raha ny endriny antsasaky ny valiny kosa no mahazaka ny efitrano fidiovana sy ireo mpikirakira fonony.
Ny fonosana fonosana fidiovana dia mety ho an'ny olona miahiahy momba ny fahadiovan'ny tena manokana rehefa mampiasa fotodrafitrasa ho an'ny daholobe. Ilaina manokana ity fonosana ity ho an'ny olona mandeha, mitoby, miantsena, na miasa amina toerana malalaka. Ny fonosana fonosana fidiovana dia mora tafiditra ao anaty poketra, boaty misy fonon-tànana na enta-mavesatra entina. Tsy misy mahafantatra ny toe-piainan'ny trano fidiovana ho an'ny besinimaro na raha misy fonony fidiovana azo omena. Ny fananana fonosana mihinana fonosana any an-tanana dia hiantoka sakana fiarovana amin'ny seza fidiovana ho an'ny daholobe. Ny fonosana ao amin'ny fonosana fidiovana tsirairay dia misy fonony fonony. Ny fonosana fonosana ho an'ny trano fidiovana dia mora ampiasaina, mora ampiasaina, ary ariana ho azy ireo vantany vao voadio ny fidiovana.
Fonosana fonosana fonosana fidiovana: boaty boaty fotsy anatiny, baoritra mitafo ivelany. Alefaso ny pallet mahazatra tsy voatery.
Serivisy fanontana: Ny Zhonghe Paper Products dia manome ny fanontana manokana na ny fanontam-pirinty OEM amin'ny boaty sy baoritra.
Manome isa: baoritra 1750 ao amin'ny 40'HC, baoritra 750 ao amin'ny 20'GP.
Teo aloha: 1/2 Fonosina fonosana fonosana taratasy fidiovana taratasy, Virjiny
Manaraka: Fampiasana ara-pahasalamana 1/4 aforeto fonony fonony Wc
Toeram-pialana amin'ny kabine, 250 Sheets / fonosana, fonosana 20 / C ...
Fonosana taratasy fidiovana taratasy fidiovana an-taratasy, 5 ...
SABOTSY FOTSY FOTSY FOTOTRA FOTOTRA, 100pcs / boaty
Taratasy fonosana fidiovana fiarovana ara-pahasalamana